‘Maohi Lives Matter’: Manameloka ny andrana nokleary ataon’ny Frantsay ny mpanao fihetsiketsehana any Tahiti · Global Voices teny Malagasy
Nanao andrana nokleary miisa 193 tany Pasifika Atsimo i Frantsa
Voadika ny 10 Aogositra 2021 11:19 GMT
Ity no sary fahatelo tamin'ny andiana andrana thermonokleary Licorne any Polinezia frantsay. Ity no sary kopia (nomerika) tamin'ny sary nalain'ny tafika frantsay. Sary sy fanazavana avy amin'ny mpisera Flickr Pierre J. (CC BY-NC-SA 2.0)
Maherin'ny 1.000 ny olona nivory tao an-drenivohitra Papeete Tahiti hanameloka ny tsy fahombiazan'ny governemanta frantsay handray andraikitra feno amin'ny andrana nokleary ao Pasifika Atsimo.
Nanao andrana nokleary miisa 193 i Frantsa tany Mā'ohi Nui (Polinezia frantsay) teo anelanelan'ny taona 1966–1996. Nitarika loza aman'atambo tamin'ny 17 Jolay 1974 ny andrana nokleary faha-41 nataon'i Frantsa tany Pasifika rehefa nanandrana baomba nokleary nantsoina hoe “Centaure” i Frantsa. Noho ny toetry ny andro tamin'io andro io dia niteraka sarona atmosfera radioaktifa izay nisy fiantraikany tamin'ny Polinezia frantsay iray manontolo izany. Voalaza ireo mponin'i Tahiti sy ireo nosy manodidina amin'ny vondrona Îles du Vent fa niharan'ny taratra miteraka iona 42 ora taorian'ny andrana, izay mety hiteraka olana ara-pahasalamana maharitra.
Nokarakaraina niaraka tamin'ny sora-baventy #MaohiLivesMatter (Manan-jo hiaina ny Maohi) ny fihetsiketsehana tamin'ny 17 Jolay 2021 mba hanasongadinana ny tolona mitohy hisian'ny rariny amin'ny (olana) nokleary. Nilaza ny mpanentana fa na dia eo aza ny fanambaran'ny Filoha Frantsay teo aloha François Hollande tamin'ny taona 2016 izay nanaiky fa misy ny fiantraikan'ny ratsy amin'ity andrana nokleary ity eo amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana dia zara fa nanome onitra na namerina tamin'ny laoniny ny Polinezia frantsay ny fanjakana frantsay.
Any Tahiti, manatevin-daharana ireo fikambanam-piangonana sy vondrom-piarahamonina mba hanao fihetsiketsehana amin'ny “#MaohiLivesMatter!” ny antoko Tavini Huiraatira no Te Ao Maohi. Hanao fitsidihana izay efa nahemotra hatry ny ela any Tahiti ny filoha frantsay #Macron eo anelanelan'ny 24-27 Jolay ary maro no maniry azy hiresaka momba ny fiantraikan'ny andrana nokleary frantsay miisa 193.
Taorian'ny famakafakana ny pejin'ny antontan-taratasy miaramila frantsay miisa 2.000 momba ny fitsapana nokleary izay nesorina ny fampirimana (novahana ny tombokase raha amin'ny fiteny azy hafa) azy dia namoaka ny valim-pikarohana momba ny fiantraikan'ilay andrana ara-pahasalamana ny vondrona mpikaroka sy mpanao gazety mpanao fanadihadiana avy amin'ny INTERPRT sy Disclose tamin'ny volana Martsa 2021.
Raha ny kajikajy nataonay, avy amin'ny fanombanana ara-tsiantifika araka ny fatra voaray, dia olona eo ho eo amin'ny 110.000 eo no tratra, saika ny vahoaka Polinezianina iray manontolo tamin'izany.
Nanaitra ny sain'ny daholobe tany Frantsa indray ny tatitra momba ny fiantraikan'ity andrana nokleary ataon'izy ireo ity. Nanao dinika an-databatra boribory momba izany tao Paris tamin'ny voalohan'ny volana Jolay ny governemanta frantsay. Na dia nitsikera ny governemanta frantsay aza ny sasany noho ny filazana fa tsy mangarahara ny ezaka fanadiovana tany Polinezia frantsay dia nanda izany ny tompon'andraikitra.
Nanizingizina ny mpanao fihetsiketsehana tao Tahiti fa tokony hanao zavatra bebe kokoa ny governemanta frantsay hamaliana ny fitakian'ny mponina Polinezianina frantsay. Nanamarika ny sasany fa raha afaka nangataka famelana tamin'ny andraikitr'i Frantsa tamin'ny fandripahana tany Rwanda tamin'ny taona 1994 ny filoha frantsay Emmanuel Macron, farafaharatsiny tokony hanao fialantsiny sahala amin'izany izy tamin'ny fiantraikan'ny andrana nokleary mampidi-doza tany Pasifika.
Nanentana ny firaisankina tany Pasifika ny hetsi-panoherana #MaohiLivesMatter.
Mijoro miray hina amin'ireo olona an'arivony izay nanao diabe tany Polinezia frantsay izahay mba hahatsiarovana ny andro nitrangan'ny andrana nokleary nanarona ny nosin'izy ireo, ary mangataka ny tompon'andraikitra hanaiky ny fahavoazana naterak'izany.
Firaisankina any Pasifika miaraka amin'i Maohi Nui.
Manatevin-daharana ireo rahalahinay sy rahavavinay Maohi izahay androany amin'ny antso ataonay amin'i #France fa #MaohiLivesMatter.
Naneho ny fanohanany ny hetsika ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina Papoazia Andrefana:
Ao anaty firaisankina miaraka amin'ny Maohi ny mpitondra any Papoazia Andrefana. Mahatsiaro ny 50 taona mahery nanaovana andrana nokleary tao Maohi, miantso hahatonga an'i Pasifika afaka sy tsy misy nokleary ireo mpitarika Papoaziana Andrefana.
Nandray anjara tamin'ilay fihetsiketsehana ihany koa ireo tanora mpikatroka avy amin'ny firenena nosy Pasifika:
Henoy ry FRANTSA! Manan-jo hiaina ny Maohi!
Heloka bevava mamono ny mahaolombelona ny andrana nokleary!
Pasifika tsy misy nokleary sy mahaleo tena IZAO!
50 taona + andrana miisa 193 = Frantsa mpamono olona !
Namoaka ity fanambarana fanohanana ity ny Fanentanana Iraisampirenena hanafoanana ny fitaovam-piadiana nokleary (ICAN) tany Aostralia:
Rehefa mivory ao Maohi Nui ianareo amin'ny 17 Jolay dia atolotray ny fanajana tanteraka ireo mpitondra sy mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay efa ela no nanohitra ny voka-dratsy napetrak'ireo fitaovam-piadiana ireo. Henonay ny antso nataonareo momba ny olana nokleary. Manohy manaraka akaiky hatrany izahay rehefa miresaka momba ny zavatra niainana nandritra ny andrana an-taonany maro sy ireo fahavoazana mbola mitohy ianareo.
Antenaina fa hitady vahaolana momba ny fiantraikan’ny andrana nokleary mandritra ny fitsidihany an'i Tahiti amin'ity volana (jolay) ity ny filoha frantsay Emmanuel Macron.